ခဲအို ချစ်တဲ့ ခယ်မလေး – Grab Love Story
“ ဟိတ်-ကလေး ..ထတော့လေ…မင်းအလုပ်သွားရဦးမယ်
မလား ညတုန်းကလည်း အစောကြီး အိပ်ပြီးတော့ကွာ… “
“ ကိုကို ..အစောကြီးရှိသေးတယ်ကွာ… ငါသိတယ် မင်းငါ့ကိုဘာလို့အစောကြီး လာနိုးနေတယ် ဆိုတာကိုနော်၊ ငါအိပ်မှဖြစ်မယ်ကွာ၊ အလုပ်ကညနေမှလေကွာ “
“တကယ့်ကောင်မဆိုးလေးဘဲကွာ၊ အဲ့တာဆိုလဲ ပြီးရောလေ၊ ကိုယ်ကတော့ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်မှာဘဲနော်“
သေချာကြည့်လေ ကောင်မလေးက ချောလေဘဲဗျာ…. သူက တကယ်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ဒှတိယတွေ့တဲ့
ပထမလူပါလေ၊ ဟုတ်တယ် သူအတွက်လည်း ကျွန်တော်က ဒုတိယတွေ့တဲ့ ပထမလူပဲ၊ ကျွန်တော်နဲ့သူစပြီး အခုလိုနေဖြစ်ကြတာလဲ
ဒီတခေါက်အလုပ်ကိစ်စနဲ့ ထွက်ခဲ့ရတဲ့ ဘန်ကောက်ခရီးစဉ်မှာစတာဘဲ၊ သူလွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်က အလုပ်လာရှာတော့ ကုမ်မဏီမှာကလဲ အဲ့တုန်းက လူလိုနေတော့ သူ့ကိုဘဲဆွဲခန့်လုပ်ခဲ့ရတာ၊ အခုခရီးထွက်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက် သူ့ကိုပါသူဠေးက ခေါ်သွားခိုင်းရော၊
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရအောင်ရယ် နောက်ပိုင်းလိုအပ်ရင် သူတယောက်ထဲ သွားနိုင်အောင်ရယ်ပေါ့၊
တကယ်တော့ ကောင်မလေးက ကျွန်တော့မိန်းမရဲ့ ညီမလေ၊ ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်လောက်တုန်းက သူက၁၄-၅နှစ်သာသာလေးလေ၊ အခုတော့ ၂၀ကျော် ဆိုတယ်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ကိုယ်လုံးသွယ်သွယ် အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ တကယ့်ပီဘိအပျိုကြီးဖြစ်လို့နေပြီဘဲ၊ သူမှာလည်း စေ့စပ်ထားတဲ့ ကောင်လေးရှိသေးတယ်၊ အစကတည်းက ကျွန်တော်တို့ကဆွေမျိုးဆိုပေမယ့် ခဲအိုနဲ့ခယ်မ ဆိုတဲ့ လူဘောင်ထဲမှာ ထိန်းထိန်းသိမ်သိမ်း နေလာခဲ့တာဘဲလေ၊ အဲ့ဟိုနေကတော့ အလုပ်က ပြန်တာစောတာနဲ့ သမီးတို့လဲ ဘန်ကောက် လျှောက်လယ်ရအောင်ဆိုတာကနေ ဒီဇတ်လမ်း စခဲ့တာဘဲ။
“ ကိုကို…သမီးတို့ ဘန်ကောက်ကိုလျှောက်လယ်ရအောင်၊ ဒီနေ့မှမလယ်ရင် နောက်နေ့တွေလဲ မအားဘူးလေ၊ နော် ကိုကို “
“ နေဦးကွာ ကိုကို-မင်းအမနဲ့လည်းဖုန်းချိန်းထားသေးတယ်ကွ၊ ပြီးမှလျှောက်လယ်လေနော်၊ အခုတော့ ကိုယ်တို့ဟော်တယ်အရင်ပြန်နှင့်ရအောင်ကွာ
၊ ရေမိုးချိုး ကိုကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမှ နောက်တခေါက်ပြန်ထွက်တာပေါ့၊ ဟုတ်ပြီလား “
“ အဲ့ကိုကိုဟာလေ သူ့မိန်းမကို နေ့တိုင်းဖုန်းခေါ်နေတာကိုတောင် တရက်တလေလေးမှ အပျက်အကွက် မခံနိုင်အောင်ဘဲ ဖြစ်ပြနေရတယ်လို့…ပိုကိုပိုလွန်းတယ်…ဟင်း…မမတို့ကတော့ သိပ်ကံကောင်းတာဘဲနော် …”
ချာတိတ်လေးရယ် ..မင်းမသိပါဘူး၊ ငါအဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလေ၊ တကယ်တော့ အိမ်က မင်းအမကို ငါနေ့တိုင်းဖုန်းဆက်နေတယ်ဆိုတာ ငါစိတ်ကိုငါထိန်းချုပ်နေတာတမျိုးဘဲဆိုတာ ငါဘဲသိပါတယ်ကွာလို့ … စိတ်ထဲကသာရေရွတ်ရင်း ဟော်တယ်ကိုပြန်လာခဲ့မိတယ်၊ ဟော်တယ်ရောက်တော့ ရေချိုးမိုးပြီး အိမ်ကိုဖုန်းခေါ် အလုပ်အစဉ်ပြေကြောင်းပြော သတိယတဲ့အကြောင်းပြောရင်း ဒီတခေါက် အလုပ်ကိစ်စက နောက်၂ပတ်လောက် ထပ်ကြာမယိဆိုတာကို အသိပေးလိုက်တယ်၊ ဖုန်းပြောနေရင်းနဲ့ မိန်းမကို အကြွေးမှတ်ထားဦးနော် ဒီမှာ ယပလက်မလေးတွေကြည့်ပြီး တင်းနေပြီကွာ အခုခွဲနေတဲ့ ရက်တွေအတွက်ဘယ်နှစ်ရက်စာ လောက်ပြန်လာမှ အတိုးနဲ့ယူရမလဲဆိုတာ နောက်တော့ မိန်းမကလည်း လာလေ..အခုပြန်လာခဲ့လေဆိုပြီးနောက်နေခဲ့သေးတယ်၊ တကယ်တော့ ဒီအချိန်တဒင်္ဂလေးမှာ ချာတိတ်ကို မေ့နေနိုင်ခဲ့တယ်…ဖုန်းချပြီးအပြင်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တော့မှ လက်ခနဲ ခေါင်းထဲကို ဝင်လာတာက ချာတိတ်ဘဲပေါ့။
“ ဒေါက်..ဒေါက်…ဟေ့ကိုကို မပြီးသေးဘူးလား၊ သူ့မိန်းမကိုအဲ့လောက်လွမ်းနေရင် ပြန်တော့ကွာနော်..
“ အေးအေးလာပြီ..လာပြီဟေ့ ညည်းကလည်း နည်းနည်းလေးမှစိတ်မရှည်ဘူး၊ သူများတွေသာယာနေတာကို တော်တော်မနာလိုဖြစ်နေတယ် ဟုတ်လား” ပြောလည်းပြော တံခါးလည်းဆွဲဖွင့်ပြီး အထွက် ကောင်မလေးကို တွေ့ လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တော်တော်ကြာအောင်ငြိမ်ပြီးကြည့်နေလိုက်မိတယ်၊
သူလည်းအဲ့လိုဘဲ ကျွန်တော်ကို သေသေချာချာလေး စိုက်ကြည့်နေတယ်၊ ၇စကန့် ၈စကန့်လောက်ကြာမှကျွန်တော်လဲ သတိတချက်ပြန်ဝင်ပြီး “ဟေ့ ကောင်မလေး တယ်လန်းနေပါလား၊ ငါ့ကတော့ ယပလက်က ဂိုဏ်းစတားတွေနဲ့ဖိုက်တင်ချနေရဦးမယ်နော်” လို့ ပေါ့ပေ့ါပါးပါးလေသံနဲ့ပြောရင်းအနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲထွက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်။
ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ့်ကောင်မလေးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်ကျော် ၅နှစ်က ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အိမ်မက်နက်သမီးလေးရယ်ပေါ့၊ အခုလည်း သူမဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီက ကိုယ်တခြမ်းကို ရင်သား အထက်နားထိ ဖော်ထားပြီးတင်ပါး သာသာလေးထိဖုံးထားတဲ့အင်္ကျီလေးနဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ကောင်မလေး… ပေါင်တံပြည့်ပြည့် တစုံက ရွှေဘိုမင်းကြိုက်ဆိုတဲ့ မင်းကြိုက်စိုးကြိုက်ပုံစံကိုဖေါ်ပြနေသလို သေးသွယ်တဲ့ခါးလေး ကလည်း လက်တကိုင်ကို ထွာဆိုင်သာ သာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အလားပေါ့၊ ဒီကြားထဲ မြင်နေရတာက ကောင်မလေးရဲ့ ရင်သား အပေါ်ပိုင်းလေး၊ ဟုတ်တယ် ရင်သားကို ကြိုးပြောက် ဘရာလေးဝတ်ကာ ကာကွယ်ထားပေမယ့် မလုံမလဲနဲ့ ပုန်းကွယ်က ရှိုးနေသလို အတွင်းသားလေးတွေက တစိတ်တပိုင်းလျှံထွက်က လှပ်ပြထားတော့ မြင်သူတကာ ရင်မောစေမယ်အလှတတွေနဲ့ ဝံ့ကြွားနေပြန်သပေါ၊ မဖြစ်သေးပါဘူး စိတ်ကိုထိန်းမှပါလို့ စိတ်ထိန်းကာ အရှေ့မှ ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ထဲလျှောက်လယ်တော့လည်း ဟိုနေရာက အနီတွေစုစု ဒီနေရာက အနီတွေစုစုနဲ့မို့
“ အခြေအနေ မကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်ချာတိတ်၊ ငါတို့ပြန်ရအောင်” ဆိုတော့
“မပြန်ချင်သေးဘူး ကိုကိုရေ တခုခုစားမယ် ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်လေးဘာလေးကြည့်ဖူးတယ်ရှိအောင် သွားကြည့်ရအောင်လေ”ဆိုပြီး ဂျီကျပါလေရော၊
အဲ့နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လိုမှပြောမရတော့ ရုပ်ရှင်ရုံကို တက်စ်စီငှားလို့ ပြေးရတာပေါ့၊ ဇာက်လမ်းက အဲ့မှာစတာ တက်စ်စီသမားကလည်း ကိုယ်ပြောတာနားမလည် ကိုယ်ပြောတဲ့အထဲမှာ ရုပ်ရှင်ရုံတခုဘဲနားလည်ပုံရတယ်၊ ကိုယ်တွေနှစ်ယောက်ကို သေသေချာချာ တချက်ကြည့်ပြီးတော့ အိုကေ ဆိုပြီး မောင်းချသွားတာဘဲ၊
ရုံရှေ့ရောက်တော့ ကြည့်လိုက်တော့ အတွဲတွေအများစု တော်တော်ဝင်နေတာကို သတိမထားဘဲ ကိုယ်လည်းဘာကားကြည့်မှာလဲမေးလိုက်ပြီး သူ့အကြိုက် ဒရမ်မာကားလို့ ထင်တဲ့ ပွဲရဲ့လက်မှတ်လေး ဝယ်ပြီး အထဲဝင်လိုက်မိခဲ့တယ်၊၊ လားလား…အထဲကြမှ ကိုယ်ဝယ်တဲ့ခုံကြည့်လိုက်တော့ သမီးရည်းစားအတွဲတွေထိုင်ဖို့
လုပ်ထားတဲ့ ၂ယောက်ထိုင်ခုံဖြစ်နေရော၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘေးတဖက်ကို ကပ်ပြီးအသာလေးထိုင်ရင်း ဇာတ်ကားကြည့်ဖို့ပြင်နေလိုက်မိတယ်၊၊
မကြာပါဘူး ဇာတ်လမ်းစလို့သိမကြာပါဘူး မင်းသားနဲ့မင်းသမီးက ကစ်ဆင်တွေ နင်းကန်ဆွဲနေတော့မှ ငါဝယ်လာတာ ဘယ်လိုလက်မှတ်လဲဟ လို့လက်မှတ်ကိုသေသေချာချာကြည့်တော့ ဘေးဘက်မှာတွေ့တာ ကလေးမကြည့်ရတဲ့ရုပ်ရှင် တဲ့၊ ကောင်မလေးကြည့်လိုက်တော့လဲ ပေါင်လေးလိမ်ပြီး ငြိမ်နေပြီးတော့ သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ ရတယ်။ သြော် သူတောင်အပျိုကြီးဖြစ်နေပြီဘဲလေ ဆိုပြီး အသာလေး အမှောင်ကိုအားကိုးလို့ သူ့မျက်နှာဝင်းဝင်း လေးနဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို ကြည့်နေမိလိုက်တယ်။
ကိုကိုရယ်…သူများကိုအဲ့လိုခိုးကြည့်နေတာ ဒီကမသိဘူးထင်နေလို့လား၊ တကယ်တော့ ကျွန်မကိုကို့ ကိုစတွေ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်လောက်ကတည်းက တဖက်သတ် စွဲလမ်းခဲ့သူဘဲဟာ၊ ကိုကို့စိတ်တွေ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိတာပေါ့၊ တကယ်တော့ ကိုကိုရယ် မိန်းကလေးက ဘယ်လိုစလို့ရမှာလဲ၊ ကိုကိုရဲ့ ရင့်ကြတ်တည်ကြည်တဲ့ ပုံပန်းကိုစတွေ့ဘူးတဲ့ ဟိုးငယ်ငယ်ကတည်းက တိတ်တိတ်လေး ချစ်နေခဲ့ရသူပါလေ။ အင်းဒီ ကိုကိုနဲ့ကတော့ မဖြစ်ပါဘူး၊ သူ့ကတော့ ဘယ်တော့မှစမယ့်သူ ဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူး၊ ကိုကို့ရင်ခွင်မှ ခဏတဖြုတ်လောက် ခိုနားချင်တဲ့ ကျွန်မကဘဲ ကြံစည်ရတော့မှာပေါ့၊ အခုလဲ ရုပ်ရှင်ရုံထဲ တခုံတည်း နှစ်ယောက် တူတူထိုင်ပြီး ကျွန်မကို တိတ်တိတ်လေးခိုးကြည့်နေတဲ့ ကိုကို့ ကိုစချင်လာတယ်။
“ကိုကို ဒီမှာမုန့် ကိုယ့်ဘာသာနှိုက်စားနော်” ဆိုပြီး မုန့်ထုတ်ကို လက်ကထောင်ပြလိုက်ပြီး လှမ်းမပေးဘဲ အသာလေး စောင့်နေခဲ့လိုက်တယ်၊ အဲ့ကိုကို့လက်ကို ရိပ်ကနဲ မြင်လိုက်ချိန်ကြမှ တိုင်ပင်ကိုက်လေး ကိုယ်ကို အရှေ့ ဘက်ကို ယို့ရင်းခြေသလုံးကို ပွတ်မလို့ပုံလေးလုပ်လိုက်တော့ ကိုကို့ရဲ့ လက်ရယ်လေ…..
နှစ်ယောက်ကြားမှာ တိုးတိတ်စွာနဲ့ ကိုကို့လက်က ကျွန်မရဲ့ ရင်သားတွေ့နဲ့အင်္ကျီကြားမှာရောက်နေခဲ့ပြီး အဲ့တာကိုမှ အလန့်တကြားပုံစံနဲ့အုပ်ကိုင်ထားမိတဲ့ ကျွန်မလက်ရယ်ပေါ့။ တကယ်ဘဲ ကိုကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံက ရယ်ချင်စရာ၊ သူက တကယ်ကိုမရဲတာတော့ သိတယ်၊ ဟင်း..အဲ့တာကြောင့်မမလို ပုံတုံးကြီးကိုရတာ။ အတင်းထိုးကျွေးမှ စားမယ့်ရုပ်ကြီး၊ တွေ့မယ်ဒီလူကြီး။
“ကိုကို….လက် ..လက်ထုတ်ဦးလေ” ကျွန်မပြောလိုက်တော့ သူအလန့်တကြားပုံနဲ့တချက် ကျွန်မရဲ့ ရင်သားလေးကို ပွတ်ဆွဲပြီး လက်ကထုတ်သွားတယ်။ ဟင်း ဒီလူကြီး အ.လွန်းတာလား အ ချင်ယောင်ဆောင်နေ တာလားတောင် မဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့ရင်ထဲ ဝုန်းကနဲဘဲ၊ ကမ်ဘာတခုပြိုပျက်ကျသံတွေကို နားထဲမှာကြားနေရသလိုဘဲပေါ့၊ ဘာလုပ်ရမယ်မသိတော့လောက်အောင် ငြိမ်ပြီး လက်ကအုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့မှ ထွက်ခတ်ခတ်တယ် ပြောရမလား အသာလေး လက်နဲ့ပွတ်မိပြီးတော့ လက်ကိုထုတ်လိုက်ရတယ်၊၊ ကောင်မလေးရယ် ရင်သားအုံက မာမာအခဲလေးလေးအဆင့်မှာဘဲရှိသေးတာဘဲ၊ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သူ့ဘက်ကိုလည်းလှည့်မကြည့်မိတော့ဘူး။
သူလည်းစကားသံတိတ်သွားတယ်၊ ခဏနေတော့ စိတ်ကတမျိုးဖြစ်လာတာနဲ့ သူဘက်လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ ကောင်မလေးရယ်လေ ကျွန်တော့ကိုတွေတွေလေးစိုက်ကြည့်နေတယ်။ ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီခဏလေးမှာဘဲ ကျွန်တော်တို့ပေါက်ကွဲခဲ့ကြတာဘဲ။
သူ့ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲ ကျွန်တော်မသိချင်တော့ဘူး၊ ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ တခုဘဲရှိတယ် ကျွန်တော်သူ့ကို ခပ်တင်းတင်းနဲ့ဖက်ထားချင်တာ။
သေချာပါတယ် အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့ ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဘလောင်ဆူနေတဲ့ရင်တွင်းအပူက သာမိုမီတာဖမ်းလို့မရတော့တာကိုဘဲ။ အဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်ရောသူရော မွတ်သိပ်စွာနဲ့ရင်ခုန်သံတွေကို အသံမထွက်ဘဲပေါင်းစည်းနေမိတယ်။ အဲ့မကြာပါဘူး ခဏလေး နေတော့ အသံတသံကျွန်တော်နားမှာကြားလာရတယ်။ တယောက်ယောက်ရဲ့ညည်းသွားသံဖျော့ဖျော့လေးပေါ့၊ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမကြားချင်ဘူးဆိုပြီး နောက်တခေါက် အသံတွေကို တိတ်စေခဲ့ပြန်တယ်။
ခဏနေတော့ သတိထားမိတာ ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုဘဲ၊ ဒင်းက ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်အချိန်ကတည်းက လုပ်ချင်နေလည်းမသိတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ တင်ပါးလေးကို ပွတ်နေလိုက် တခါဖျစ်ပေးလိုက်နဲ့ လေ။ ခဏလောက်နေတော့ သူလည်းတချက်လူးလွန့်လာပြီး တချက်နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေး ကွာအသွားမှာ
“ ကိုကို ဟော်တယ်ပြန်ကြရအောင်လား….ဟင်…” တဲ့
“ အင်းလေ..ချာတိတ်က ပြန်ချင်နေပြီလား …ကိုကိုတော့မဝသေးဘူးချာတိတ်ကိုနမ်းရတာ…” လို့ ပြောလိုက်တော့
“ ကိုကိုရယ် ဟိုကျတော့ ကိုကိုသဘောရှိပေါ့..နော်..ဒီမှာက ချာတိတ်ရှက်တယ်ကွယ်” တဲ့
သူနှုတ်ခမ်းက တီးတိုးလေး ထွက်ကျလာတော့ ကျွန်တော်လည်း
“ ကဲဒါဆိုလာလေ..ကိုကိုတို့အခုဘဲထွက်လိုက်ကြတာပေါ့’’ ဆိုပြီး သူလေးလက်ကိုဆွဲပြီး ဟိုတယ်ကိုသာ အမြန်ပြန်ဖို့ရုပ်ရှင်ရုံထဲက ထွက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်။
အဲ့တော့မှ သတိထားမိတာက ကိုယ့်ဘေးနားက ခုံတွေ ကိုယ်အရှေ့က ခုံတွေက အတွဲလေးတွေရော တချို့အတွဲကြီးတွေရော အလုပ်ဖြစ်နေကြပြီဘဲ။ ကျွန်တော်မှာတော့ မီးမှောင်မှောင် အပေါက်အလမ်းတည့်လှချည်အောင်မေ့နေတာ သူတို့ကြည့်လိုက်တော့ ငါ့အဆင့်က မူကြိုလောက် ရှိပါသေးလားဆိုတာ အဲ့တော့မှ သိလိုက်ရတယ်။ တချို့အတွဲရှေ့ကဖြတ်တော့ ကိုယ့်တောင် ဂရုမစိုက်နိုင်အားကြဘူး၊ စိတ်ဓါတ်တွေ တတ်ကြွနေလိုက်ပုံများ အ-၃လုံးသင်တန်းအလားဘဲ။ ကြားရချက်ကလည်း နားထောင်စရာမလိုဘဲ နားထဲဝင်လာတာက အင့်..အင်း..အား ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အသေကျက်မှတ်နေကြသလားဘဲ။
အသာလေး နှစ်ယောက်သား ရုံအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ ချက်ခြင်း တက်စ်တစီးကို ငှားပြီးဟော်တယ် ကိုဘဲတန်းပြန်လာ လိုက်ကြတော့တယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံကအပြန် တလမ်းလုံးလည်း အနီရောင်တွေချည်းဘဲ၊ သူတို့ကို ကြည့်မနေချင်တော့ ကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း ပါးပြင်မှာ ပန်းရောင်သန်းနေတဲ့ ရှက်မျက်နှာလေးနဲ့ ပေါ့၊ ကျွန်တော်လည်း ကြည့်နေရင်း သူ့ကိုသနားလာတာနဲ့ ရင်ခွင်ထဲဆွဲထည့်ပြီး ပန်းရောင်ကို အရောင်ပြန်ကျဖို့ ကြိုးစားမိပြန်သပေါ့။
ကောင်မလေးရယ် နင့်လက်သည်းတွေ သိပ်ရှည်တာဘဲ။ နောက်များတော့ ညှပ်ခိုင်းမှ ဖြစ်မှာပါ။
အခုတော့ ကောင်မလေးလက်မှာ ဟို ပန့်လို့အော်နေတဲ့ ကောင်ဆိုးလေးတွေဝတ်တဲ့ အချွန်တွေ အတတ်တွေနဲ့ဟာ မျိုးတွေရှိရင်တောင် ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။ သေချာပါတယ် ကျွန်တော်သူ့ကို အရမ်းချစ်သွားတာ။
ဟော်တယ်ရောက်တော့ ကိုကိုရယ် “ ချာတိတ်ခဏနော်” ဆိုပြီး သူ့အခန်းကိုတန်းဝင်သွားတယ်လေ။
အခန်းဝမှ လူကိုထားသွားတော့ ဘယ်ဘက်သွားရမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့၊ ကိုယ့်အခန်းဘဲ ကိုယ်ဝင်ရမလား၊ သူ့အခန်းဘဲ လိုက်ဝင်သွားရမလား ဝေခွဲမရနေတုန်းမှာ တချက်အတွေးဝင်သွားတာက ကိုယ်အခန်းသူပြောတယ့် ခဏလေးဆိုတော့ သူ့အခန်းထဲမလိုက်စေချင်လို့နေမှာပေါ့လို့ဝမ်းနည်းစိတ်က ဝင်လာတာပေါ့။ ကိုကိုရယ် ရှင်ကြီးကို ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲ။ ဒါနဲ့ဘဲ ကိုယ့်အခန်းထဲ ကိုယ်ဝင်ပြီး တံခါးကို လော့မချဘဲ သူများပြန်ဝင် လာလေမလား ဆိုတဲ့တိတ်တခိုးအတွေးနဲ့ အဝတ်အစားလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ခန်ဒါကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့သန့်စင်ခန်းဝင်ခဲ့လိုက်တော့တယ်။ အထဲရောက်တော့ ကျွန်မကိုယ်ကို ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်နဲ့ကြည့်မှ …..
အို……… ရှက်လိုက်တာရှင်ရယ်…ကျွန်မလည်ဂုတ်တွေ ရင်ညွှန့်တွေမှာ …ရှင်ကြီးကလေ ….ဟင်းးးးး ကျွန်မသတိမထားမိတဲ့ဘယ်နေရာတွေရော ဘာတွေဖြစ်နေမလဲ ကျွန်မလိုက်ကြည့်မိတော့ ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ငါ့သဲစုလေးရော ဘာဖြစ်နေပြီလဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့… ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ အတွင်းခံလေးကတော့ တချိန်လုံးရွှဲနေတော့ပျော့ပျော့နဲ့ဖြူဖြူအရည်လေးတွေ
တောင်မနည်းပါလား။ တော်သေးတာပေါ့…ကိုကို သူ့အခန်းကို တခါတည်းမခေါ်သွားတာ။
အင်းးးးး ကျွန်မရဲ့ သဲစု ဟုတ်တယ် အရင်က မောင်ကတော့ အဲ့လိုဘဲခေါ်တာဘဲ။ မောင့်သဲစုကလေးတဲ့၊ ဘာလို့ခေါ်တာလဲမေးတော့ မောင်က
“မောင့်အသဲလေးကို ငုံထားမတတ်ချစ်တာကွ သိလား။ ဒီဟာလေးကကြတော့ မောင့်အသဲလေးရဲ့ ဟာလေးမို့လို့လေ၊ မောင်ကလည်းချစ်လွန်းလို့ခေါ်တာပေါ့”တဲ့၊
မောင်ဆိုတာက ကျွန်မချစ်သူ၊ သူကအခု သင်္ဘောလိုက်နေတာလေ၊ ကျွန်မကို ရန်ကုန်မှာတုန်းက အသဲအသန်လိုက်၊
ပြီးတော့ သမီးရည်းစားဖြစ်တော့ ငွေရှာရဦးမယ် အသဲရယ်ဆိုပြီး အခုတော့ ငွေနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့မောင်။
@ မောင် … ကျမ မောင့်ကို သစ်စာမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်မောင်။ မောင်ရဲ့သတင်းတွေ ကျွန်မကြားတယ်မောင်။ မောင်သင်္ဘော အမြဲကမ်းကပ်ရတဲ့ ဂျပန်မှာ ဘယ်သူနဲ့ မောင်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ကျမသိနေတယ်မောင်။ မောင်နဲ့အခုငြိနေတယ်ဆိုတဲ့ ချောစုဆိုတာ ကျမသူငယ်ချင်းဆိုတာ ကိုရောမောင်သိရဲ့လားမောင်ရဲ့။ မောင်ရယ် ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်ပြန်လာတုန်းက တူတူနေရအောင်ဆိုတော့ @
တော်ပြီ…. မောင့်အကြောင်းကိုမတွေးချင်တော့ဘူး အလိုလို ဝမ်းနည်းစိတ်နဲ့ ရေပန်းကိုဖွင့်ပြီး ရေပန်းအောက်မှာ ငိုနေမိတယ်၊ မောင် သိပ်ရက်စက်တယ်မောင်ရယ်။
ပြောသာပြောနေတာ ဘယ်နေရာကမှ ထူးတဲ့အသံက မထွက်လာဘူး။ ဒီကောင်မလေး ဘယ်ရောက် သွားပါ လိမ့်ပေါ့၊
အသာလေး အခန်းထဲဝင်လိုက်တော့မှာ ရေချိုးခန်းဘက်ကနေ အသံက ကြားနေရတယ်၊့ ရေကျသံတွေကြားထဲက
ရှိုက်သံသဲ့သဲ့လေးတခုကိုပေါ့၊ အဲ့တော့မှ အသိထဲပြန်ဝင်လာတယ်။
ငါမှားသွားပြီလား၊ ချာတိတ်ရယ် ဘာကြောင့်ငိုနေတာလဲကွယ်….. အစကတည်းကရှောင်နေတာကို အတင်းဝင်တိုးပြီးတော့ အခုတော့ သူဝမ်းနည်းနေပြီလားပေါ့၊ အတွေးတွေယောက်ယက်ခပ်ရင်းအခန်းက ပြန်ထွက်ဖို့အလုပ်
“ကျွီ—– သြော် ကိုကို ရောက်နေပြီလား” ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အသံကြားတော့ တချက်လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ ဟော်တယ်ကပေးတဲ့ တဘက်တထည်ကို ရင်မှာစည်းပြီး မလုံတဲ့ခန်ဒါကိုယ်ကို နောက်ပုဝါလေးတထည်နဲ့ ရေသုတ်နေတဲ့
“ အင်းကလေးရဲ့ ကိုကိုအခုဘဲဝင်လာတာလေ၊ ညီမကိုမမြင်လို့ ကိုကိုလိုက်ကြည့်နေတာ…ပေးလေ ကိုကိုရေသုတ်ပေးမယ်” ဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုကောင်မလေးရဲ့ သဘက်ကိုလှမ်းဆွဲရင်းနဲ့ အနောက်ဘက်က ဆံနွယ်တွေကို ရေသုတ်ပေးလိုက်မိတယ်။
စိတ်ထဲမှာ ဝေခွဲမရဘူး ချာတိတ်ရယ်………………..
ကျွန်တော် သူ့လက်က ပုဝါလေးယူရင်း သူ့ကိုရေသုတ်ပေးရင်း စိတ်ထဲက ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေအတိုင်း
အတိုင်အဖောက်မညီ ပြောနေမိတယ်၊ သူ့ဘက်ကတော့ စိတ်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ထားပုံပါဘဲ၊ အေးဆေးစွာ ပြန်လည်ပြောရင်း
ကျွန်တော့ဘက် လှည့်ပြီး လက်ကလေးထောင် နှခမ်းမှာလာကပ်ရင်း တားမြစ်လာတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ နှစ်ဦးသား တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ တဦးကို တဦး ပျောက်ရှသွားတော့မယ့်အလား စိုက်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်။
တကယ်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင် ကျောဘက်က ဆံနွယ်တွေကို ရေသုတ်ပေးနေတော့ လူနှစ်ဦးရဲ့ အသက်ရှုသံတွေက အတိုင်းသားကြားရလောက်အောက် နီးကပ်နေပြီးသားပါ၊ နောက်တော့ ကျွန်တော်လက်ကတင်းကနဲဖြစ်အောင် ဆွဲယူပြီးပွေ့ဖက်ရင်းနဲ့
အဲ့နောက်မှာတော့ အနှစ်နှစ်အလလ မက်နေတဲ့ အိမ်မက်ထဲက အတိုင်း သူ့ရဲ့ ဖူးငုံနီထွေး နှခမ်းပါးလေးကို ဆွဲငုံလိုက်ရင်းနဲ့
သူ့ဘက်ကလည်း အင့် မှန်းမသိ အွမ့် မှန်းမသိ အသံကလေးတချက် ထွက်လာပြီးတော့ ဆေးမကူသေးတဲ့ နှခမ်းပါးတွေရဲ့အတွင်းကနေ
ပြင်းပြတဲ့ ဆွဲငင်မှုတခုနဲ့ အပြန်အလှန်လိုက်လျှောမှု့ရှိကြောင်းပြသနေခဲ့တယ်။
နှခမ်းပါးတစုံကို ငုံထားရာကနေ အပေါ် နှခမ်းပါးတခုထဲဆီကို ဆွဲငုံလိုက် အောက်နှခမ်းထူထူလေးကို တချက်ဆွဲငုံလိုက်နဲ့ပေါ့။
တချိန်ထဲမှာဘဲ ကျွန်တော်ရဲ့ လက်တဘက်က သူ့ခါးကိုတင်းတင်းဖက်ထားမိသလို နောက်တဖက်ကလည်း သူ့တင်ပါး၂ခြမ်းကိုအောက်ကနေ ပွတ်ပေးနေမိတယ်။ ကျွန်တော် အဲ့အချိန်မှာ အဲ့တာတွေကို လုပ်မယ်လို့ အကွက်မချခဲ့ဘူး၊
ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို တဆင့်ချင်းလုပ်နေတာက နောက်ထပ် ကျွန်တော်မသိတဲ့ ကျွန်တော်ဘဲလား ဘာလည်းတော့ မသိနေခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော် သိတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့စိတ်တွေကတော့ သူ့နှခမ်းတစုံဆီကနေ ကျွန်တော့အတွက် သူ့မှာဘယ်လောက်နေရာရှိသလဲဆိုတာကို
ဟမ် ….. ကလေး…….
အိပ်ယာပေါ်သွားရအောင် ကိုကို…. သမီး ကိုကို့ကို ဖက်ပြီး ခဏလောက်နေချင်တယ်……..
ပြီးမှ ကိုကို့ သဘောလေ……….
အင်းသွားလေ လို့ရေရွတ်ရင်း နှစ်ဦးသား ကုတင်ဆီကိုလှမ်းနေရင်း ကုတင်ဆီအရောက် သူမကုတင်ပေါ်ကို လှမ်းအတက်
ခါးပတ်ထားတဲ့ ပုဝါအောက်က ဖွေးကနဲ မြင်လိုက်ရတဲ့ နောက်ပိုင်းအလှ
တင်းကနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ညီတော်မောင်ရဲ့ အချက်ပြသံ
ဖက်ကနဲ လှမ်းဆွဲမိတဲ့ လက် တချိန်ထဲမှာဘဲ ဒီဘက်အခန်းပြန်အလာကို ဝတ်လာတဲ့ ဘောင်းဘီအတိုကို ဇစ်ဖြုတ်ခါ ကန်ထုတ်ရင်းနဲ့
ပုဝါကိုအထက်လှန်ပြီး ညီတော်မောင်ကို ဒူးတဖက် ကုတင်အောင် တဖက် ကုတင်ပေါ်ဖြစ်နေတဲ့ ချာတိတ်ရဲ့ နောက်ကနေ
တချက်ပွတ်ဆွဲရင်း ရတနာတွင်းလေးအဝမှာ တေ့ရင်းပွတ်လိုက်မိတယ်၊
အီးးးးးးးးးး ကို ….ကိုးး………….မပီတဲ့ အသံအစုံနဲ့ သူမကလေးကလည်း ကုတင်ပေါ်ကို ကားယားလေး မှောက်အကျ ညီတော်မောင်ကလည်း တင်းမာစွာနဲ့ ခေါင်းဝင်အလျှို့……….
မရည်ရွယ်ပါဘူး၊ အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်လို့၊ လုပ်ချင်ခဲ့တာက ပွတ်ပြီးတော့ ကစားယုံ သက်သက်ပါ၊
မမျှော်လင်ဘဲ ရလိုက်တဲ့ အရသာတခုလိုဘဲ၊ ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရလောက်အောင်ပါဘဲ၊ တင်းကြပ်တဲ့အရစ်တခုနဲ့ အပြင်ဘက်က ရေချိုးပြီးကာစမို့ အေးစက်မှု အတွင်းထဲက ဝင်နေတဲ့ ဖွားဘက်တော်ခေါင်းရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ခံစားမှု
အိုးးးးးး ကိုကို … သမီးနာတယ်
ခဏလောက် ထုတ်ပေးပါ ကိုကိုရယ် ……… ဆိုတဲ့ စကားသံတွေရဲ့ကြားမှာ
ဖွားဘက်တော်က ခေါင်းခါငြင်းတယ် ဆက်ခနဲ ဆက်ခနဲ နဲ့
သူက ငြင်းတော့ ကျွန်တော်က အားနာတတ်တဲ့ သူတဦးလိုပုံနဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပြိုလဲနေတဲ့ ချာတိတ်ကို
ချာတိတ် နာတာ ခဏဘဲနော်၊ လို့ဆိုရင်း လည်ဂုတ်လေးကိုတချက် ဖွဖွလေး နမ်းပြီး
ရင်မှာစီးထားတဲ့ သဘက်ကိုဖြေ သိပ်ပြီး ပစ်မှားခဲ့တဲ့ သားမြတ်နုနုလေးတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေရင်းနဲ့
လည်ဂုတ်ကနေ နားတဝိုက် ပါးတဝိုက် နဲ့ မျှော့သွေးစမ်းသလို လုပ်နေမိတယ်၊
အောက်က ကောင်ကလည်း အထဲဝင်မရ အနောက်လည်း ပြန်မထွက်ချင်တော့ ရောက်နေတဲ့ ခေါင်းလေးကိုဘဲ လှုပ်တုတ်လှုပ်တုတ် လုပ်နေတာပေါ့၊
ပြီးတော့မှ ကုတင်ပေါ်ကို မှောက်ခုံကားယားကျနေတဲ့ ချာတိတ်ကို သူ့အနောက်ကနေဖက်ရင်း မှောက်ခုံ ကားယားကြီးနဲ့ တေ့ဖြုတ်ကြီး မှိန်းနေမိတော့တယ်၊ သူ့ဘက်ကလည်း အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တွန့်ခနဲ တွန့်ခနဲ ဖြစ်လာတာကို သတိထားမိလာတယ်၊
ခလေး….. စိတ်မဆိုးနဲ့နော်လို့ တဖွဖွဆိုရင်း နမ်းရှိုက်နေမိတယ်၊
သမီး မနေတတ်တော့ဘူး….ကိုကို့ သဘောပဲကိုကိုရာ။
ကုတင်ပေါ်ရှိနေတဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ်ပုံစံကိုတောင် မပြင်နိုင်ဘဲ ညီတော်မောင်ကို တာလွှတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။
ကိုယ်ကသာ စိတ်ကတဖောင်းဖောင်း ကစ်နေတာ အောက်က ငပဲကတော့ ရှေ့တလက်မကို သိမ်းဖို့ကိုတောင် အတင်း၊
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွင်းလိုက် ချော့လိုက် အလုပ်မှာတော့ သူမလေးရဲ့ အထဲကို ၂လက်မလောက်ဝင်သွားပြီပေါ့။
၂လက်မလောက်ရောက်တော့ အသာလေး ပြန်ထုတ်ပြန်ထဲ့ ၃-၄ခါလောက်လုပ်ပေးရင်းနဲ့ရှေ့နည်းနည်းတိုးတိုးလိုက်အမိမှာ
ထိပ်စီက တင်းကနဲ တခုခံနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်၊
အင်း ….. ဟုတ်တယ် ကိုကို
သူနဲ့ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး ကိုကိုရဲ့………ဟုဆိုကာ အံကြိတ်ရင်းနဲ့ မွေ့ယာကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့